Muuqaal kulul oo dadka ku xira, ma aha internetka
Farshaxanka (hore u ahaa tiyaatarka Bloomington iyo Art Center) waxaa lagu aasaasay isku xirka masraxa Bloomington Civic Theater iyo Xarunta Farshaxanka Bloomington sanadkii 2009. ururada aasaasay ee jilista fanka, fanka muuqaalka, iyo waxbarashada farshaxanka.
Dhawaan, metro koonfureed waxay soo martay nooc cusub oo ah "meel kuleyl oo moobiic ah" oo xushmaynaysa farshaxanka iyo farshaxanka Molly Reichert iyo Andrea Johnson. Sanduuqa Little Sauna wuxuu bixiyay meel aad u yar oo loogu talagalay bulshada dhexdeeda oo u dhexeysa qaybta weyn ee Koonfurta Loop ee Bloomington, Minnesota. Sauna waxa uu u safray xaafad toddobaadkii ugu dambeeyey bishii February iyo toddobaadkii ugu horreeyay ee Maarso, iyada oo hal todobaad la joogteeyo albaab walba albaab walba si uu u abuuro xarun bulsho bulsho.
Isku-keenista dhaxalka isku-dhafan ee ka badan 90 sanadood oo farshaxan leh, Artistry wuxuu ujeedkiisu yahay inuu fidiyo oo sii xoojiyo deeqaha ururadooda aasaasiga ah ee farshaxanka, fanka muuqaalka, iyo waxbarashada farshaxanka.
Little Box Sauna waxay gacan ka geysaneysaa xiriirka ka dhexeeya ganacsiyada, dadka soo booqda, iyo dadka deegaanka si loo abuuro isgaarsiin macno leh, waxaanay tahay firfircooni loogu bedelayo garashada qaybta jimicsiga ee South Loop. Ku noolaanshaha bannaan bannaan oo udhexeeya dhismayaasha waaweyn, Little Box Sauna wuxuu na siinayaa meel aan ku aragno oo aan u soconno, meel joogsi ah oo u dhexeeya dhismayaasha iyo gawaarida. U keenida dad cusub marka ay u dabaal-degaan kuwa maalin kasta, waxay u muuqataa inay dhisayso cufnaanta iyo xiisaha xaafadda iyo magaalada oo dhan.
The Little Box Sauna waa mida ugu horeysa ee mashaariicda dibad baxa Isku-duwidda Wax-abuurka ee Koonfurta Loop dadaal ah in farshaxanku la bilaabo City of Bloomington sanadka 2014. Fanka fejignaanta ah ayaa fududeynaya farshaxanka dadweynaha iyo mashaariicda wax-qabadka naqshadeynta iyagoo u doodaya fannaaniinta iyo fududeynta mashaariicda farshaxanka dadweynaha oo furaha u ah bulsho firfircoon oo farxad leh. Baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan mashaariicda meelaynta farshaxanka bogga.